Etu esi mejuputa Ahia Dabere na Ahia (ABM) | Martech Zone
Mgbe mbụ m nụrụ okwu ahụ Ahịa-Dabere na Ahịa afọ ole na ole gara aga, m na-asụ ude. Dị ka ogologo oge m na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ, anyị nwere ndị nnọchi anya ahịa dị mkpa nke nyochara, lekwasịrị anya, ma mechie akaụntụ ndị isi.
ABM abụghị naanị okwu ugha, n'agbanyeghị. ABM etolitela n'ime usoro egosipụtara, nke a na-edozi nke ọma yana ụfọdụ ngwaọrụ dị egwu iji nyere aka chọpụta ohere na soro ha ruo na njedebe. ABM na-aga n’ihu ịrị elu na ewu ewu na nnabata na ọtụtụ ụlọ ọrụ - na ezi ihe kpatara ya. Ọ bụ usoro ọgụgụ isi na uru maka ịmalite azụmaahịa gị.
Terminus 'ABM platform bụ onye ndu na ụlọ ọrụ ahụ, na-etinye ihe karịrị netwọọdụ mgbasa ozi 50 na ihe karịrị 200 nde data data. Na-adịbeghị anya ozi ọma nke ịzụta ha nke BrightFunnel, Terminus na-akwalite ikpo okwu ya na nyocha B2B ahia na njiri mara. Ebumnuche Terminus bụ ime ka ndị otu ahịa ahịa nke ụlọ ọrụ B2B ọ bụla dị n'otu.
Nzọụkwụ 7 iji bido na ABM
Terminus dere edemede mara mma nke na-akọwa etu ụlọ ọrụ nwere ike bido na ahia di iche-iche n'ime nzukọ ha.
Chịkọta Ahịa Akaụntụ Gị Team
Kọwaa ABM gị Ihe Mgbaru Ọsọ na Atụmatụ
Họrọ Akaụntụ Gị-Dabere Marketing Technology
Chọpụta ma Buru Tarzọ Ebumnuche Nnabata
Họrọ ọwa gị ma rụọ ọrụ gị Izi ozi
Mezuo ABM Campaigns ma bido ire ahia
Nyochaa ma bulie Mmemme ABM gị
Ọ bụ ezie na nke ahụ nwere ike iyi ka ọ dị mfe, Terminus were ya n'ihu ma wepụta akwụkwọ ọgụgụ zuru ezu na itinye usoro mmemme azụmaahịa. Terminus alaghị azụ - ọ bụ usoro nzọpụta pụtara ìhè maka iwulite mmemme ABM na-aga nke ọma yana ọ gụnyere akwụkwọ nke gị nke ga - enyere gị aka iduzi gị #FlipMyFunnel usoro.
The eBook na-ejegharị gị site na ihe ọ bụla nke ABM - site na nhọrọ nke otu gị, na-achọpụta usoro ziri ezi nyere azụmahịa gị, na-atụ aro mmefu ego, ịhọrọ nchịkọta ngwá ọrụ, ịmata ndị ahịa ị na-eche, na-eme atụmatụ mkpọsa gị, ịmepụta usoro ịzụ ahịa na ahịa gị, ịmata ndị na-ege gị ntị, ịhọrọ ọwa gị, imezu, ịlele, iji bulie usoro ABM gị. Tinyere ihe edeturu na usoro Terminus yana ihe ọmụmụ.
Budata Terminus 'Blueprint na Akaụntụ Dabere na Akaụntụ
Banyere Terminus 'ABM Platform
Terminus bụ isi ahịa na-eduga azụmaahịa na-enyere ndị na-ere ahịa B2B aka ịchọta akaụntụ, na-etinye ndị na-eme mkpebi, ma na-eme ka ahịa na pipeline na-ere ngwa ngwa n'ọtụtụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmụtakwu banyere otu Terminus dijitalụ mgbasa ozi nwere ike isi bụrụ akụkụ dị mkpa nke atụmatụ ABM gị, hazie oge ikori otu n’ime ndị ọkachamara ABM ha ugbu a.
Tags: abmabm iwuabm mkpọsaabm ebookmmejuputa abmakwụkwọ ọcha abmahia dabere na ahịagbaa ọkụnjedebe